DXVK 1.4.6 - Wepụtara ya na atụmatụ ọhụụ na mmelite | Site na Linux
NZP Ọ bụ usoro ntụgharị iji nyefee ntuziaka nke Microsoft DirectX 10 na 11 graphical API na ntuziaka nke isi mmalite dị egwu nke eserese API Vulkan, nke bụ nke a na-etinye ntakịrị obere site na omume ọma ya. Cheta na Vulkan dị n'okpuru Khronos Group, dị ka ndị ọzọ dị ka OpenCL, OpenGL, wdg. Cheta na Vulkan na-abịa site na AMD's Mantle project. Ndị mmepe nke ihe ịtụnanya a na-aga n'ihu na-azụlite ya, ọ nwere mmasị pụrụ iche na ụwa egwuregwu na GNU / Linux, dịka maka iji ọrụ dị ka Wine ma ọ bụ Valve's Proton. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịtụgharị asụsụ ntuziaka ndị a ma mee ka egwuregwu vidio ndị obodo dakọtara maka ikpo okwu Microsoft Windows.
Ọfọn, na DXVK 1.4.6 hapụ Na-akpali ọhụrụ atụmatụ e webata a oru ngo. N'ezie, dị ka ọ dị na mbụ na mbipụta, arụkwala ọrụ na chinchi ndị dị ugbu a na koodu nke ụdị nke gara aga, nke agbazigharịrị n'akụkụ. N'ezie, enweghị nnukwu atụmatụ ọhụụ ọ bụla, kama ha lekwasịrị anya n'ịkwalite nsogbu ndị ahụ bụ mgbe ụfọdụ egwuregwu Windows na-agba na nsụgharị ntụgharị a mgbe ejiri Wine ma ọ bụ Proton. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata nsogbu nsogbu ndị ahụ, ha bụ:
Dòziri nsogbu na-adịghị mma ma na-akpasu iwe nke kpatara ngwa na-akwụsị ịrụ ọrụ. Nke a mere mgbe ị na-eme mgbanwe na ọnọdụ ihuenyo ma ọ bụ mgbe ị mechiri egwuregwu vidiyo ị na-eji.
Ndị mmepe rụkwara ezigbo ọrụ idozi ahụhụ ọzọ na - akpata ya CPU arụmọrụ na-eweda oge. Nke a kpasuru onye ọrụ ahụ iwe, ọkachasị mgbe ọ na-arụ ọrụ na-ebu ibu metụtara DirectX Deferred Contexts.
Egwuregwu vidiyo dị ka Euro Truck Simulator 2 na American Truck Simulator, nke amara nke ọma, nwekwara ndozi na DXVK 1.4.6 iji mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma. Kpọmkwem, ha na-agbazi nsogbu ndị ahụ site na ịsụgharị.
Fans nke Final Fantasy XIV Ha nọkwa na chi, ebe edozi nsogbu kpụ ọkụ n’ọnụ nke mere ka ọ kwụsị ọrụ.
N'ikpeazụ, enwerekwa mgbanwe maka usoro vidiyo egwuregwu Warcraft III echefuru. N'okwu a, etinyere atụmatụ ọhụrụ nke na-enye ohere ka egwuregwu ahụ gbaa ọsọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » DXVK 1.4.6 - Wepụtara ya na njirimara na mmelite ọhụụ